सबैभन्दा मँहगा जेट चढ्ने विश्वका शक्तिशाली नेताहरु – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
काठमाडौं । विश्वका अधिकांश नेताहरूले एयर फोर्स वान जाहज चढ्छन् । तर यसको अर्थ यो होइन की सबै नेताले एयर फोर्स वान नै चढ्छन् ।
१ .बेलायती महारानी
मूल्य: ७ करोड ७५ लाख युरो
२. बेलायती प्रधानमन्त्री थिरेसा मे
जहाज: एयरबस ए३३०
मूल्य: १९ करोड ६० लाख पाउन्ड
३. रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन
जहाज: आइएल–९६–३०० पीयू
मूल्य: ३९ करोड पाउन्ड
४. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प
जहाज: एयर फोर्स वान
मूल्य: ७८ करोड पाउन्ड
५. चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ
जहाज: बोइङ ७४७–४००
मूल्य: १९ करोड ५० लाख पाउन्ड
६. जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केल
जहाज: एयरबस ए ३४०
मूल्य: २३ करोड ५० लाख पाउन्ड
७. फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुवल म्याक्रोन
जहाज: एयरबस ए ३३०–२००
मूल्य: २१ करोड पाउन्ड
८. ब्रुनाइका सुल्तान हसनल बोलकेयह
मूल्य: १७ करोड पाउन्ड
९. कतारी अमिर तमीम बिन हमद अल थानी
मूल्य: १ अर्ब २० करोड पाउन्ड
यो धर्तीकै एक धनाढ्य मध्येका एक हुन् कतारका अमिर तमीम बिन हमद अल थानी । उनीसँग दुईवटा एयरबस ए ३२०, दुई बोइङ ७४७–८ बिमान छन् । अमिरको सचिवालयमा रहेका १ हजार कर्मचारीलाई समेत उनले निजी बिमानबाटै यात्रा गराउँछन् । एक पटक तमीम बिन हमद अल थानी जापानी प्रधानमन्त्री भेट्न जाँदा १० वटा बिमान लिएर पुगेका थिए ।